အိုဘားမားရဲ့ မြန်မာပေါ်လီစီကို ပြောင်းဖို့ တောင်းဆို (BBC) | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Genocide Crime ခေါ် လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုကြီး (အမြည်း)
“တရားသစ်သို့ တမ်းခြင်း” (ကဗျာ) »
မတ်လ ၁ ၊ ၂၀၁၃ – မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်က ရိုဟင်ဂျာတွေ အပေါ် ပြုမူမှုတွေ၊ ကချင်ပြည်နယ်မှာ စစ်တပ်ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကို ဦးတည်နေတဲ့ လက္ခဏာတွေလို့ ဖေါ်ပြပြီး အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ပြောင်းဖို့ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့က ကွန်ဂရက်လွှတ်တော် လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကော်မီတီ ကြားနာမှုမှာ United to End Genocide လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု တားဆီးရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ ကွန်ဂရက် လွှတ်တော် အမတ်ဟောင်း တွန်အင်ဒရူးက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီနှစ် နှောင်းပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒကို ကွန်ဂရက်က ပြန်သုံးသပ်ရာမှာ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေကို ထည့်စဉ်းစားပြီး ပြတ်ပြတ်သားသား မူဝါဒချဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။ M-Media @
Tags: Asia, BBC, Burma, Kachin State, Myanmar, Shan State, Thein Sein, United
This entry was posted on March 2, 2013 at 1:31 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.